Sawirro: Hooyga Ra'isul wasaarihii hore ee Malaysia oo laga helay lacag iyo dahab badan oo la musuqay - Caasimada Online
Home Warar Sawirro: Hooyga Ra’isul wasaarihii hore ee Malaysia oo laga helay lacag iyo...
Sawirro: Hooyga Ra’isul wasaarihii hore ee Malaysia oo laga helay lacag iyo dahab badan oo la musuqay
Muqdisho (Caasimada Online)-Qoraal lagu daabacay Wakaaladda Wararka Reuters, ayaa waxaa lagu sheegay in Booliska dalka Maleysia ay gudaha u galeen Hooyga ra’iisulwasaarihii hore ee dalkaas Najib Razaq oo laga helay Lacago iyo Dahab.
Warbixinta oo lagu xiganaayo Saraakiil ka tirsan Booliska ayaa waxaa lagu sheegay in ay qabteen Karoono badan oo ay ka buuxaan waxyaabo qaali ah iyo boorsooyinka ay ka buuxaan lacago qalaad.
Howlgalka iyo baaritaanka lagu sameeyay dhismeyaasha ku yaalla Kuala Lumpur ayaa lala xiriiriyay baaritaanno lagu hayo dhaqaalaha mashruuca horumarinta ee 1MDB, sida ay sheegeen.
Musuqmaasuqa loo soo jeediyay Eedeysanaha ee mashruuca 1MDB ayaa qayb wayn ka ahaa waxyihaabihii guul darrada u horseeday Najiib, doorashadaasna waxaa ku guulaystay Mahathir Maxamed oo ay horay xulafo u ahaan jireen.
Mr Mahathir Maxamed oo ah ra’iisul wasaaraha cusub ee wadankaasi ayaa sheegay in uu ka baaraan dagayo in uu dib u furo dacwaddaas, wuxuuna rumaysan yahay in dib loo heli karo lacagta la lunsaday. Najiibna wuxuu ka mamnuucay ka bixitaanka dalka.